Iibso Jilibka Neefsashada Taakuleynta La Isticmaali Karo Ice Pack Gel Wixii Dhaawacyada Isboortiga - Gelin Bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Jilibka Neefsashada La Isticmaali Karo ee Xidhmada Barafka Jel ee Dhaawacyada Ciyaaraha
$ 26.99 qiimaha joogtada ah $ 35.99
Jilibka Neefsashada La Isticmaali Karo ee Xidhmada Barafka Jel ee Dhaawacyada Ciyaaraha gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Saameyn: Ka sii daa xanuunka Xanuunka
Nooca Shayga: Xargaha & Taageerooyinka
Nooca: Baakad baraf ah
Feature: Dabacsanaanta & Fududeynta Fudud, Fudud & Xanuun, Xanuun kulul
Nooca: Gargaarka dejinta, xirmada barafka jilibka, duub daweynta barafka qabow
Cabbirka badeecadda: duub baraf ah 9.84 "x 8.85", suunka: 10.43 "labada dhinacba.
Is rogrogmi kara & Fududeyn Fudud: 1 duub baraf baraf ah oo lagu daray. Wareegyada barafka weyn ee jilicsan ee dib loo isticmaali karo ayaa ah kuwo isku dhafan oo heer sare ah oo qiimo jaban oo PVC ah oo ay weheliso taageero dhar jilicsan. Tixgeli naqshadeynta xargaha caagga ah & xargaha laastikada si loo hubiyo in si ka sii habboon oo jilicsan ugu habboon jilibka ama aagga xusulka. Duubka barafka jilibka ayaa ah mid jilicsan marka la qaboojiyo wuxuuna ahaanayaa mid qabow waqtiga daaweynta ee dhakhtarku kugula taliyay ee 20 daqiiqo.
Xanuunnada Fudud & Xanuunnada: Duubista baakadka jilibka ee FDA ayaa diiwaangashan waa mid waara, oo aan sun ahayn, oo aan lahayn cinjirka 'latex', oo aan lahayn nasasho, iyo daadasho la'aan. Duubida jilibka ayaa si gaar ah loogu talagalay jilbaha iyo xusullada waxayna u keentaa xanuun dabiici ah murqo xanuun, nabarro, yareysaa caabuq iyo barar, waxayna ka caawisaa in la dedejiyo ka soo kabashada dhaawacyada isboortiga, qalliinka jilibka, bedelka jilibka, xusulka teniska, jilibka orodka, iyo inbadan.
Daaweynta Qabow ee Kulul. Daaweynta kulul, kuleylka xirmada microwave-ka 10-15 ilbiriqsiyo goos goos ah, yareynta xanuunka iyo kordhinta wareegga si kor loogu qaado bogsashada degdegga ah. Daaweynta qabow, dhig baakada jel qaboojiyaha ugu yaraan 2 saacadood ama ilaa heerkulka la doonayo laga gaaro. Waxay kufiicantahay murqaha, xanuunka arthritis-ka, murgacasho, barar, nabaro, iyo kalagoys xanuun.
Gargaarka dejinta: Haddii aad doorbideyso inaad xanuunka joojiso ama aad dejiso iyada oo gacan ka heleysa daaweynta diirran, xirmadan barafka jilicsan ee dib loo isticmaali karo ayaa ah xulashada kuugu habboon adiga! Diyaar u noqo si aad u yareyso jilibka iyo kalagoysyada xanuunka oo aad dareento diyaar u ah inaad maalinta ku qabato xirmadan jel ee tayada sare leh oo gaarsiisa ilaa 20 daqiiqo oo gargaar qabow ah oo jilbahaaga iyo xusulladaada.
Si fiican ayaa loo helay alaabada u hoggaansamida si aad u wanaagsan loo baakadeeyey